Jubbaland Yaa Badbaadin Kara? | Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaalada kumeel gaar ah ee Jubbaland waxay laciircireysa siyaasiyiin, wax garad, iyo bulshada qeebeheeda kala duwan. Kismaayo 30 kii sano ee ugu dambeeyay waxay soo marti galisay awoodo qabiil oo isceersanaaya sida USC, SPM, SLA iyo kuwo kale oo badan sida Hogaamiye gooxeedya, Argagaxisa. Marwalba degaanka sida caadiga ah waxa xukuma jiray qof walba oo takada iyo Airortka Kismaya qabsada. Kismaya waxa soo maray Gen. Moorgan, Col. Abaas, Barre hiirale, Alshabaab iyo maamulka Jubbaland oo hada talada haaya.
Maamulka hada talada haya uu madaxweynaha kayahay Ahmed madoobe waxa ladoortay 15-May 2013, kadib 500 oo ergo ah isugu yimaadeen magaalo Kismaayo, iyagoo u doortay Axmed Madoobe inuu noqdo Madaxweynaha maamulka Jubbaland. sidoo kale August 15, 2015 Baarlamaanka Jubbaland ayaa si aqlabiyad ah markale ku doortay Axmed Madoobe in uu noqdo Madaxweynaha Jubbland 4-ta sano ee soo socota.
Inta uu talada hayay Ahmed qorshaha uu kagaabiyay waxa mid ah qabashada Jubbada dhexe, xalinta beelaha saluugsan saami qeebsiga iyo saxaafada xurta ah. wuxu kuguuleystay waxyaaba badan sida:
Jubbaland waxa daga qabaa’ila kala duwan, dadka deeganka waxay ubarteen in qofkii kismaya qabsadaba dadka dila, dhaca, kufsada. Waxa iska caadi ahaa in qabiilka Meesha qabsada uu si bareer ah udila qof kuudoona oo qabiilada kala ah, Ahmed madoobe wuxu kuguuleysti in uu dila qof walba oo qofkale dila, asaga oo kabilaabay 7 aski oo Jufadiisa ah inuu halmaalin dila markay dileen 2 nin oo jufa kale ah.
Degaan walba uu maamulka jubbaland gacanta kudhigay waxa nabad galay dadka, tusaale, magaalada Kismaayo waxay noqotay magaala amni ah, qarax uusan kadhicin, dadkana si xur ah uganacsadaan. Ahmed wuxu badbaadiyay nafta iyo maalka dadka magaalada dagan wallow dhacdooyin yaryar ay jireen markuu maamulka bilowga ahaa.
Magaala walba oo jubbaland kutaala dadka waxay bilaabeen dib ukabasha, waxa dib loofuray schoola fara badan oo xirnaa waqtigii Shabaabka.
Magaalooyinka uu maamulka gacanta kudhigay waxa dib loo dayactiray xafiisyada ay kushaqeeyaan dowladaha hoose, waxa ladhisay dhismooyin cusub sida madaxtooyo, guriga martida, iyo xafiisya fara badan oo wazaaradaha kushaqeeyaan.
Waxa dib loo dayactiray airportka kismaayo, tagada, wadooyin fara badan iyo suuqyada wax lagu iibiya.
In sharuuc cusub ladajiya, sida sharciga guryaha, canshuraha, arimaha bulshada. Waxa la hirgaliyay maxkamada, waxa dib loodhisay ciidamada nabad suguda, booliska iyo tv-ga jubbaland.
Ayada oo dhaqaalaha liita, caqabada farabadana iyo culeesyana dheeryihiin ayu Ahmed madoobe kushaqeeyay kuna kuuleysti in uu maamulka jubbaland shaqeeyo, kana mid noqda maamul goboleedyada dalka ugu firfircoon.
Hada waxa lagaaray waqtigii doorashada jubbaland; August 15, 2019 waxa tartami doona musharixiin badan. musharixiinta qaarkood waxay kasoo hoos shaqeeyeen Ahmed madoobe ayaga oo gacan yara yaal u ahaa ilamana aha inay wax weyn kusoo kordhin karaan jubbaland. kuwa kale waa musharixiin daba kariix ah oo awooda kale ay soo tureen si danahooda ugu fushadaan, iyo kuwa kale oo kartidi leh lakiin awood sidaas usii buuran laheen, hadaba su’aasha ayaa ah, yaa Jubaland badbaadin kara ama kabixi kara hoosha adag ee hortaala?
Musharixiinta kasoo horjeedo Ahmed madoobe aya kudoodaaya in 7 sano uu hayay xilka hadana katago Meesha, Taariiqda waa inan wax kabaranaa, reysalwazaaraha Malasia wuxu talada dalkaas hayaa laga soobilaaba 1981 ilaa hada. Wadanka Jarmalka reysal wazaare Anjela markal 2005 ilaa hada, Ismail Omar geele ilaa 1999, Paulkikame, wadanka Rwanda lagasoo bilaaba 2000 ilaa hada. Turkey, Erdoqan laga soo bilaaba 2003. Bangaladesh, Sh. Hasina 1996 ilaa hada. Singapoor 2004 ilaa hada, iyo wadama kale oo fara badan. masuuliyaantan dhaman waxay heleen waqti ay hormar kugaarsiiyaan deegaanadooda. Madaxda hadii waqti lasiiya waxay hiigsan karaan hamila hormarineed, go’aan qaadasha wanaagsan iyo qibrad hogaamineed. Wadamadaas kor kuxusan oo dhan waxay gaareen xasilooni siyaasadeed, dhaqaale iyo amni.
wax micna ah masameyneyso in maamulka lagu tijaabiyo qof cusub, Howla farabadan oo hormar ah aya socda, Ahmed madoobe maadaama uu hogaaminayay jubbaland waxa soo maray marxalada kala duwan, wuxu kabartay cashar, waa qabiir iyo hogaamiye meel soo gaarsiiyay jubbaland hadana raba inuu markale hogaamiye. Hadii lafiiriya caqliga saliimka ah waxa haboon reer jubbaland inay si taxatir leh ugu fiirsadaan qofka ay taageerada siinayaan. Inay kala bartaan musharaxa xurta ah iyo musharaxa Meesha lakeensan raba ama lawata, hadaba suaasha aya ah musharax awoodo kale wataan jubbaland wax uma qaban karaaa? Waxaa qoray Mahad Hassan
President Farmajo wishes to the people of Somalia on the occasion of Eid